Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Turkiga oo soo gaaray Muqdisho | Baydhabo Online
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Turkiga oo soo gaaray Muqdisho
Wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisal Wasaare ku Xigeenka Dalka Turkiga Veysi Kaynak ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho iyadoo ay R/Wasaare K/Xigeenka J.F Soomaaliya Mahdi Max’ad Guuleed iyo mas’uuliyiin kale ay si diiran ugu soo dhaweeyeen garoonka diyaaraha ee Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho.
Wafdiga ayaa shir la qaatay mas’uuliyiinta iyagoo ka wada hadlay arrimaha la xiriira abaaraha iyo horumarka dalka. R/wasaare ku xigeenka Turkiga ayaa duqa magaalada Muqdisho ku wareejiyay 52 gaadiid iyo warshad dhismo taaso loogu talagalay in lugu hormariyo bilicda Caasimadda Soomaaliya.
R/Wasaare K/X Turkiga ayaa ka dhawaajiyay inay gacan ballaaran ka geeysan doonaan taakuleynta dadka Abaaruhu saameeyay sidoo kale ay garab ku siin doonaan sidii loogu sameyn lahaa cilmi baaris ku aaddan sababaha keenay abaaraha iyo sidii looga hortagi lahaa.
Radiomuqdisho & Caasimada